Sidee Google u dhistaa Webka Sawirada? - jawaab celceliska
Webka xoqitaanku wuxuu ku noqday urur kasta oo ka mid ah waxqabadyada lagama maarmaanka ah sababtoo ah faa'iidooyin badan. Inkasta oo shirkad kastaa ay ka faa'iideysato, ka faa'iideystaha ugu muhiimsan ee shabakadda webka waa Google.
Qalabka Google ee qalabka shabakadda ayaa loo qaybin karaa 3 qaybood oo waaweyn, waxayna yihiin:
Google oo ku gurguurtey ayaa sidoo kale loo yaqaan Google bots. Waxaa loo adeegsadaa in la xoqo bogga oo dhan bogga. Waxaa jira balaayiin websaydh ah oo shabakadda ku jira, boqolaalna waxaa lagu martiqaadaa daqiiqad kasta, sidaas darteed google-ga waa in ay raadiyaan bogagga shabakadaha sida ugu dhakhsaha badan.
Dhibaatooyinkaasi waxay kudhexayaan algorithms qaarkood si loo go'aamiyo goobaha raadraaca iyo bogagga shabakadda si loo xoqo. Waxay ka bilaabmaan liis ay ku qoran yihiin URL-yada laga soo saaray geeddi-socodkii hore. Marka loo eego algorithms, kumbuyuutarrada ayaa ogaanaya xiriirada bogg kasta marka ay gurguuraan oo ay ku daraan isku xirka liiska boggaga si loo daboolo. Inkastoo shabakadda shabakadda, waxay fiirinayaan boggaga cusub iyo kuwa la cusbooneysiiyay.
Si loo saxo khaladaadka caamka ah, Google kumbuyuutarada ma laha awood ay kuqoraan bogagga internetka. Taasi waa shaqada muujinta Google. Dhibaatooyinka ayaa kaliya ka walwalsan inay galaan bogagga shabakadda mudada ugu dheer ee suurtogalka ah. Dhammaadka geeddi-socodka ay udubdhexaadinayaan, Goolasha Google waxay ku wareejinayaan dhammaan waxyaabaha laga soo ururiyey bogagga shabakadda ilaa galka Google.
Bandhigga Google wuxuu helayaa dhammaan waxyaabaha la xoqay oo ka soo jeeda Google waxaana loo adeegsadaa in lagu darajeeyo bogagga shabakadaha ee la tuuray. Bandhigga Google wuxuu qabtaa shaqadan iyadoo lagu saleynayo algorithm. Sida horay loogu soo sheegay, muujinta Google waxay ku jirtaa boggaga internetka waxayna u dirtaa safafka inay raadiyaan natiijada serverka. Websaydhyo leh darajo sare oo loogu talagalay niche gaar ah ayaa marka hore ku soo baxa bogagga natiijooyinka raadinta ee ku jira nuucaas. Waa wax u fudud sidan.
Marka qofku baaro ereyada muhiimka ah, bogaga internetka ee ugu haboon waxaa loo adeegaa ama lagu soo celiyaa sida ay u kala horeeyaan. Inkasta oo darajo loo isticmaalo si loo go'aamiyo tixgelinta website-yada si loo raadiyo ereyo muhiim ah, ma aha qodobka kaliya ee loo isticmaalo go'aan qaadashada ku habboonaanta. Waxaa jira arrimo kale oo loo isticmaalo si loo go'aamiyo tixgelinta bogagga shabakadda.
Mid kasta oo ka mid ah xiriiriyeyaasha bogga ka yimaada boggaga kale waxay sare u qaadaan darajada iyo ujeedka bogga. Si kastaba ha noqotee, dhammaan isku xirnadu ma siman yihiin. Xiriirada ugu qiimaha badan waa kuwa la helay sababtoo ah tayada bogga.
Ka hor intaan la gaarin, tirada jeer ee ereyo muhiim ah ayaa u muuqday bog bogga loo isticmaalo si kor loogu qaado darajada bogga. Hase yeeshee, mar dambe ma qabanayso. Maxaa hadda muhiim u ah Google waa tayada content. Mawduuca waxaa loola jeedaa in la akhriyo, iyo akhristayaasha waxaa kaliya oo soo jiidanaya tayada content iyo ma muuqato muuqaal muhiim ah. Marka, bogga ugu muhiimsan ee su'aal kasta waa inuu lahaadaa heerka ugu sarreeya wuxuuna u muuqanayaa marka hore natiijooyinka baaritaankaas. Haddii kale, Google waxay luminaysaa kalsoonida.
Gebogabada, xaqiiqo muhiim ah oo laga qaado maqaalkani waa iyada oo aan la duubin websaydhka, Google iyo makiinadaha kale ee raadiyeyaashu ku soo noqonayaan natiijo la'aan Source .